၁၀ တန်းဖြေဆိုမည့် မျက်မမြင်ကျောင်းသားများ သင်္ချာဘာသာတွင် အထူးအခက်အခဲရှိဟုဆို
တရုတ်အမျိုးသားနှင့်လက်ထပ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရမှုများတွင် မိဘများကပါ သဘောတူညီ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများရှိ
တရားမ၀င်ကားပါကင်ကြေး မြို့တော်ဝန်ကိုယ်တိုင် အကောက်ခံခဲ့ရ
ပုသိမ်တက္ကသိုလ် သင်္ချာဌာနမှ ရုံးစာရေးအမျိုးသမီးအသတ်ခံရမှုတွင် ကျူးလွန်သူမှာ ဖခင်အရင်းဖြစ်နေ
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ရာတွင် ပွဲစားများနှင့်ပေါင်း၍ လိမ်လည်ခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကို ပြင်းထန်စွာ အရေးယူခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီးပြော
နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်မှုမရှိအောင် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်နေသူများရှိကြောင်း မုံရွာအောင်ရှင် ပြောကြား
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူကို သေဒဏ်ပေးနိုင်ရေးဥပဒေကြမ်း ယခုလအတွင်း လွှတ်တော်တင်မည်
ရန်ကုန်မြို့တွင် အထပ်မြင့် ကားပါကင်များ တည်ဆောက်ရန် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကို တင်ဒါခေါ်ယူမည်
ဆန်ကုန်သည်များထံမှ ကျပ်သိန်းပေါင်းငါးသောင်းကျော် လိမ်လည်ထွက်ပြေးသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းကာ အမှုကို CID သို့ လွှဲပြောင်းစစ်ဆေးမည်ဟု သိရ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရပ်အရှည်ဆုံးအမျိုးသား ဖိနပ်အလှူရှင်လိုအပ်နေ
Local Feb 09,2018
အရပ် ၇ ပေ ၈ လက်မ ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရပ်အရှည်ဆုံးအမျိုးသား ကိုဝင်းဇော်ဦးသည် လက်ရှိ အချိန်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံက လှူဒါန်းထားသည့် ကွင်းထိုးဖိနပ်သုံးရန် ပြတ်သွားသောကြောင့် ဖိနပ်အလှူ ရှင်လိုအပ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကိုဝင်းဇော်ဦးကို ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာကျော်ဖိနပ်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့် GEORG WESSELS က ရှူးဖိနပ်နှစ်ရန်နှင့် ကွင်းထိုးဖိနပ်သုံးရန် စုစုပေါင်းငါးရန်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ် ၂၆ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ M3 စားသောက်ဆိုင်၌ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ကွင်းထိုးဖိနပ်သုံးရန်မှာ ပြတ်သွားသောကြောင့် ဖိနပ် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
''ရှူးဖိနပ်နှစ်ရန်ကတော့ တောမှာစီးရမှာ အဆင်မပြေဘူးလေ။ ကွင်းထိုးသုံးရန်ကတော့ စီးတာများတော့ ပြတ်သွားပြီ။ အခုကြုံရာဖိနပ်စီးနေရတော့ အဆင်မပြေဘူး။ ဂျာမနီကုမ္ပဏီက လှူတဲ့ဖိနပ်က ကျွန်တော့အတွက် သီးသန့်လုပ်ထားတာဆိုတော့ စီးရတာအဆင်ပြေတယ်။ အခုကုမ္ပဏီကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှန်းမသိတော့ ဒုက္ခရောက် နေတာ''ဟု ကိုဝင်းဇော်ဦးက News Watch သို့ ပြောသည်။
ကိုဝင်းဇော်ဦး၏ ခြေဖ၀ါးမှာ အလျား ၁၂ လက်မခွဲနှင့် အနံ ၅ လက်မ ရှိသောကြောင့် သူ့အတွက် အထူးချုပ် လုပ်ထားသည့် ဖိနပ်ဖြစ်မှသာ အဆင်ပြေနိုင်မည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နတ်မောက် မြို့နယ် ထုံးပေါက်ချိုင်းကျေး ရွာဇာတိဖြစ်သော ကိုဝင်းဇော်ဦးသည် ခရိုမီဂလီ (ခေါ်) ကြီး ထွားမှုဟော်မုန်း အထွက်များမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်အရှည်ဆုံးအမျိုးသားဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အသည်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း၏ အကူအညီဖြင့် ဦးခေါင်းအတွင်းရှိ ပီကျူထရီအကျိတ် ကို စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်နိုင် ခဲ့သည်။ ''ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ပြီးတော့ ခြေထောက်က ပိုလိမ်သွား တယ်။ ညှပ်ဖိနပ်စီးလို့ အဆင်မပြေဘူး။ အရပ်ကတော့ ခွဲစိတ်ပြီးကတည်းက ထပ်မရှည်တော့ပါဘူး''ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကိုဝင်းဇော်ဦးသည် လက်ရှိအချိန်တွင် မကွေးမြို့အနီးရှိ ၀ါဂွမ်းကျေးရွာတွင် ညီမဖြစ်သူ၏ မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံမှု ဖျက်သိမ်းမည်မဟုတ်ဘဲ ဖြေလျှော့မှုများသာ ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု ပြည်တွင်းအခွန်မှ တာဝန်ရှိသူပြော
သတင်းထောက်များ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေးရှုပြီး မေးစေချင်တယ်ဟု ဦးခင်ဇော်ဦးပြော
YBS CEO ဦးစောဘိုဘို ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် တိုင်းအစိုးရထံ စာတင်ထား
စုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံတွင် ပညာရပ် ၃ မျိုးသင်ကြားနေပြီး တက်ရောက်သူ ၂၀၀ နီးပါးရှိ
မြိတ်မြို့ဈေးကွက်အတွင်းဝယ်လိုအား နည်းပါးလာ၍ သံသေတ္တာလုပ်ငန်းများ မြိတ်မြို့တွင် လုပ်ကိုင်သူနည်းပါးလာ
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကို ထောင်မချဘဲ၊ လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်သာပေးမည့် ဥပဒေကြမ်းအတည်ဖြစ်တော့မည်
ရန်ကုန်ဘူတာကြီး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းအတွက် တရုတ်-မြန်မာ-စင်ကာပူကုမ္ပဏီများ ပူးပေါင်းထားသည့် လုပ်ငန်းစုတင်ဒါအောင်
ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် စရန်ပေးသွင်းပြီး ၀ယ်ယူမှုမရှိသည့်ဖြစ်စဉ်များရှိနေ၍ စရန်ကြေးနှစ်ဆမြှင့်ရန် စီစဉ်နေ
အလွတ်စုံထောက်လုပ်ငန်းသို့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုစုံစမ်းရန် အလုပ်အပ်နှံမှုများနေ
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဂူတာပြင်ကျေးရွာတွင် လူသေအလောင်းများ မြှုပ်နှံထားသည့် နေရာ ၅ ခု တွေ့ရှိဟု အေပီ၏သတင်းဖော်ပြချက်အပေါ် ပြည်နယ်အစိုးရကို စိစစ်ခိုင်းထားကြောင်း ဦးဇော်ဌေးပြော
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေး စိုးရိမ်ရ၊ မီးလောင်စေသည့်ပုလင်းပစ်သည့် ကိစ္စထက် ပို၍ဆိုရွားသည့် အလားအလာများ ရှိလာနိုင်ဟုဆို
ဗေဒင်လာမေးသည့် အမျိုးသမီးများကို ကာယိနြေ္ဒပျက်ပြားအောင် ပြုမူသည့် ဗေဒင်ဆရာ ဟောခန်းပိတ်ထား
ဘောလိဝုဒ်ဒါရိုက်တာ ရိုက်ကူးပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၄ နိုင်ငံတွင်ပြသမည့် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းအတွက် မြန်မာသရုပ်ဆောင် ၂ ဦး အလိုရှိသည်
Download PDF June 13,2017
To keep our readers well informed about what is going on around the world and inside Burma as well of course. We do not speculate on rumour to avoid giving mix signals to our readers.
01 388 763
VARIETY OF NEWS! For more news and invaluable articles by well renowned columists, please read our weekly publications.
”အပတ်စဉ်ထုတ် စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ် ” နှင့် ” လစဉ်ထုတ် ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ ရသစုံ မဂ္ဂဇင်း”... အားပေးမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
News Watch Weekly coversawide range of topics from politics to entertainment, from insight analysis and commentary of various issues happenning around the world of today and yesteryear to interviews with celebrities and public figures. For more news and invaluable articles by well renowned columists, please read our weekly publications. Keep following us on Facebook!
© Copyright 2017 - NewsWatch - All rights reserved.
Developed by Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.